WARBIXIN: Asene Wenger Oo La Ogaaday Shaqsiga Uu Doonayo In Lagu Bedelo Balse Waxa Uu Caddeeyey In Uusan Si Shaaric Ah U Soo Bandhigi Doonin - Laacib.net
WARBIXIN: Asene Wenger Oo La Ogaaday Shaqsiga Uu Doonayo In Lagu Bedelo Balse Waxa Uu Caddeeyey In Uusan Si Shaaric Ah U Soo Bandhigi Doonin
Arsene Wenger waxa uu ku taageeray Mikel Arteta in uu noqdo tababarihii ka bedeli lahaa Arenal.
Arsenal waxa ay baadi goob ugu jirtaa tababare cusub kaddib markii uu Arsene Wenger ka tagay 22 sano kaddib dhammaadka ol’olahan.
Laacibkii hore ee khadka dhexe Arsenal uga ciyaari jiray Mikel Arteta ayaa ka mid ah kuwa ugu cad cad in uu bedelo Wenger.
“Waxa uu leeyahay tayadii shaqadan oo dhan, haa waxan qabaa in uu ka mid yahay kuwa ugu cad cad,” ayuu Wenger u sheegay being Sport.
“Waxa uu ahaa hoggaamiye, kalgacal badan ayuu ciyaarta u hayaa si fiicanna ayuu kooxda u yaqaan, wuu yaqaan waxa kooxda muhiimka ah waxa uuna naadiga u soo noqday kabtan. Markaa maxaa diidaya?”
Wax badan waxaa laga yiri khibrad yarada Arteta maadama uusan wali koox maamulin, su’aashaas markii la weydiiiyey Wenger waxa uu sheegay in Arsenala ay joogaan tababareyaal khibrad dhaxlay.
Arteta waxa uu taabarenimada muddooyinkii dambe ka baranayey Pe Guardiola oo uu gacan yare u ahaa.
“Khibrad badan ayaa ka tagay, sida dadkii ila joogay Steve Bould kaas oo lix sano oo waayo aragnimo ah leh iyo Jens Lehmann.”
“Waxa uu ahaa gacan yaraha Guardiola sidoo kale, markaa guud ahaan in uu tayaddii leeyahaya ayaan qabaa.
Wenger waxa uu hadalkiisa raaciyey: “Dooni maayo in aan shaaric ahaan taas saameyn ku yeesho aniga waxaan muhiim u arkaa in ay dhookhooda keensadaan si hadaf leh kaddib marka ay go’aanka gaaraan waan taageeri doonaa.”
adam.ak 17-05-2018 at 8:17 pm -
aniga waxan isleyahay markel aad buu u garanaya mamulka wayo waxa cadeyn inoogu filan intii uu hogaamiyaha kooxda ahay khibrad yarida laga quul darenayo waxa iyadana tusaalo uugu filan zidane horay koox kale uma uusan soo ma mulin markii laga reebo yar yarka maderd hadana wataa madrid dii weyneed ku hogaminaya champion kii 3 xaad horayn laliga uugu soo hogamiyay marka makel arteta fursad waa in uu helaa si loo arko wax qabadkiisa iyo wax qabad lantisa ma ahan in lagu dhaganaado ragii hore ee duqooway iayaguba waxa ay soo mareen xiligan oo kale hada waa doorkii ciyaar toydaii garoonka kabaha ka la baxay ee iskagag fadhiistay kubada markaan waa in ay wada noqdaan dhamantood macalimiin leeliya kooxaha kubada cakta intii qibrad u leha artetana waa in loo aminaa sida , gatuso.gerad.seydrof loo aaminay
abdi 17-05-2018 at 4:36 pm -